Taratasim-pifandraisana RV: Fetibe maharitra herinandro ao Goatemalà ho fankalazana ny fahasamihafan’ny tenin-janatany ao anaty aterineto · Global Voices teny Malagasy
Taratasim-pifandraisana RV: Fetibe maharitra herinandro ao Goatemalà ho fankalazana ny fahasamihafan'ny tenin-janatany ao anaty aterineto
Araho indray ny vaovao farany ato amin'ny gazetin'ny Rising Voices.
Voadika ny 22 Oktobra 2019 7:58 GMT
Fanamarihan'ny Rising Voices: ity taratasim-pifandraisanay mpivoaka indroa isam-bolana ity dia manome famintinana ireo lahatsoratra farany nivoaka momba ireo endriky ny fampidirana nomerika, anatin'izany ny fidirana sy ny fampiasàna ireo fitaovana nomerika, ary koa ireo fomba hafa sy hetsika ahafahan'ireo vondrompiarahamonina mandray anjara feno anaty aterineto. Vakio eto ireo taratasim-pifandraisana efa nivoaka teo aloha.
Anatin'ireo hetsika fankalazana ny Taona Iraisam-pirenena ho an'ny Tenin-janatany dia miara-miasa amin'ny DW Akademie Latin America, ny Kaqchikel Wikiwuj, ny CCE Guatemala, ny Avina Foundation, ny Universidad Maya Kaqchikel, ny UNESCO Guatemala, ary ny Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) ny Rising Voices hikarakarana ny Fetiben'i Amerika Latina ho an'ny Tenin-janatany ao anaty Aterineto. Mikendry ny hanandratra sy hanaparitaka ireo tenin-janatany ao anaty aterineto ity hetsika ity amin'ny alàlan'ny famoronana tontolo ho an'ny adihevitra, fifanakalozana, ary ny fiarahamiasa.
Nanomboka mialoha ny Fetibe tamin'ity taona ity, miaraka aminà fihaonana isam-paritra roa ho an'ny fikatrohana mafana fo ho an'ny tenin-janatany ao amin'ireo tanànan'i Cobán ny 23 Aogositra. Ity manaraka ity misy lahatsary famintinana ny hetsika isam-paritra faharoa natao tao Quetzaltenango ny 27 Septambra.
Tafiditra anatin'ny hetsika amin'ity herinandro ity ny fivoriana maharitra telo andro (22-25 Oktobra) ataon'ireo olona 60 mpikatroka nomerika ho an'ny tenin-janatany manerana an'i Amerika Latina, arahina valandresaka misokatra ho atao ny 25-27 Oktobra ao amin'ny Tanànan'i Goatemalà.
Mba hanarahanao ny resadresaka, miangavy anao hanaraka ny kaonty Twitter ofisialin'ny @FLLii2019.
BEBE KOKOA AVY AO AMIN'NY BILAOGIN'NY RISING VOICES
Anatin'ny fankalazàna ny Taona Iraisam-pirenena ho an'ireo Tenin-janatany 2019 (#IYIL19), niray hery tamin'ireo mpiara-miasa aminay ny Rising Voices tanatin'ny fikarakaràna hetsipanentanana efatra miodina ao amin'ny Twitter entina hanazavàna ny asan'ireo mpikatroka mafana fo ho an'ny tenin-janatany manerana izao tontolo izao. Raha manitikitika anao ny toerana misy ireo tenin-janatany ankehitriny manerana ny tany sy ireo izay tafiditra anatin'ny famelomana azy ireo indray sy/na ny fanandratana azy ireny, manasa anao hanaraka ireo hetsipanentananay ao amin'ny Twitter! Ary raha te hahalala bebe kokoa momba ireo mpampiantrano anay amin'izao fotoana ianao, afaka mitsikilo ireo lahatsoratra avoakany anatin'ny mombamomba azy toy izao manaraka izao:
I Moffat Kihoro momba ny Yiakunte, tenin'ny vahoaka Yiaku monina ao amin'ny Alan'i Mukogodo ao amin'ny Faripiadidian'i Laikipia, Kenya
I Rayo Cruz [es] momba ny teny Zapotec, ampiasaina ao Sierra Norte an'i Oaxaca, Meksika
I Felipe H. López [es] momba ny asany amin'ny famelomana indray ny teny Zapotec sy ny fanandratana azy anatinà tontolon-kanakampielezana
I Abhinash Das momba ny Karbi sy ireo teny hafa tandindonin-doza ao amin'ny fanjakan'i Assam, Inde.
Hatao ao Berlin amin'ny Novambra ho avy izao ny Andiany faha-14 amin'ny Fihaonana Fanao Isan-taona ho an'ny Vovonana momba ny Fitantanana ny Aterineto (IGF 2019). Miodina manodidina izao manaraka izao ireo lohahevitra amin'ity taona ity: (1) Fitantanana ny Angondrakitra; (2) Fampidirana Nomerika; ary ny (3) Fiarovana, Fandriampahalemana, Filaminana sy Faharetana. Manasa anao hisoratra anarana eto (mialohan'ny 1 Novambra) ho an'ny fandraisana anjara any an-toerana ary jereo eto ireo fomba hafa ahafahana mandray anjara.
Ny Australian Digital Inclusion Index, izay mivoaka isan-taona nanomboka tamin'ny 2016, dia ezaky ny vondron'olona mba hahatakarana bebe kokoa ny toerana misy ny fampidirana nomerika, sy ireo sakana amin'ny zavatra toy ireo manerana an'i Aostralia. Nivoaka vao haingana ny tatitra 2019 nataon-dry zareo ary namboraka fa singa mandray anjara anatin'izany avoko ny vola miditra, ny fanabeazana, ny asa, ny toeram-ponenana. Manasa anao hijery ilay tatitra feno sy ny angondrakitra mifandraika aminy eto.
FAMAKIANA, FIHAINOANA ary FIJERENA FANAMPINY
Mirotsaka anaty Hazakazaka Nomerika i India, izay Mamela an-tapitrisany aty aoriana ao amin'ny BBC
Te Hampiditra Aterineto ho an'ny Rehetra i Meksika. Mety Hanena ny Fahantrana ihany koa ny Fampidirana ny Olon-drehetra anaty Aterineto. ao amin'ny PRI
Ny Fizarazaràna Nomerika ao Amerika ao amin'ny The River
Fampidirana Nomerika an'ireo Beantitra Voahilikilika ao amin'ny eCampusOntario
Fitendry ho an'ny Smartphone novolavolaina ho an'ireo tenin-janatany ho famelomana avo lenta azy ireo ao amin'ny ABC News (Anaty Aterineto)
Misoràta anarana handray ny taratasim-pifandraisana Rising Voices
Misaotra an'i Eddie Avila tamin'ny fandraisany anjara tanatin'ity taratasim-pifandraisana